Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny lesoka CHECKDB "Hadisoana teo amin'ny latabatra: Hamboarina ny ID ID ##, ny index ID ##"
Home Products DataNumen SQL Recovery Lesoka CHECKDB: lesoka teo amin'ny latabatra: ny ID ID ##, ny index ID ## dia haverina.
Fanamboarana: Ny index Clustered dia nanorina tamim-pahombiazana ilay zavatra "sysobjvalues" ao amin'ny tahiry "Error1".
Fanamboarana: Ny index Nonclustered dia nanamboatra tamim-pahombiazana ho an'ny zavatra "syscolpars" ao amin'ny database "Error1".
Valin'ny DBCC momba ny 'Error1'.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysrscols'.
Misy laharana 1092 ao anatin'ny pejy 14 ho an'ny zavatra “sys.sysrscols”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysrowsets'.
Misy laharana 148 ao amin'ny pejy 3 ho an'ny zavatra “sys.sysrowsets”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysclones'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysclones”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysallocunits'.
Misy laharana 172 ao amin'ny pejy 2 ho an'ny zavatra “sys.sysallocunits”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysfiles1'.
Misy laharana 2 ao amin'ny pejy 1 ho an'ny zavatra “sys.sysfiles1”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysseobjvalues'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysseobjvalues”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.syspriorities'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.syspriorities”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysdbffamafan- '.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysdbffamafan- ".
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysfgfrag'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysfgfrag”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysdbfIles '.
Misy laharana 2 ao amin'ny pejy 1 ho an'ny zavatra “sys.sysdbfIles ".
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.syspru'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.syspru”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysbrickfiles'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysbrickfiles”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysphfg'.
Misy laharana 1 ao amin'ny pejy 1 ho an'ny zavatra “sys.sysphfg”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysprufiles'.
Misy laharana 2 ao amin'ny pejy 1 ho an'ny zavatra “sys.sysprufiles”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysftinds'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysftinds”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysowners'.
Misy laharana 14 ao amin'ny pejy 1 ho an'ny zavatra "sys.sysowners".
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysdbreg'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysdbreg”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysprivs'.
Misy laharana 140 ao amin'ny pejy 1 ho an'ny zavatra “sys.sysprivs”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.syscolpars'.
Fanamboarana: Ny pejy (1:63) dia nifampiraharaha tamin'ny ID ID 41, ID ID 1, ID fizarazarana 281474979397632, fizarana ID 281474979397632 (karazana angona In-row).
Fanamboarana: Nanamboatra an-tsakany sy an-davany ny index Nonclustered ho an'ny zavatra "sys.syscolpars, nc" ao amin'ny database "Error1".
Msg 8945, haavo 16, fanjakana 1, andalana 8
Hadisoana eo amin'ny latabatra: haorina indray ny ID ID 41, ny mari-panondro 1.
Msg 8978, haavo 16, fanjakana 1, andalana 8
Hadisoana latabatra: ID ID 41, ID ID 1, ID fizarazarana 281474979397632, fizarana ID 281474979397632 (karazana angona In-row). Pejy (1:61) dia tsy ampy fanovozan-kevitra avy amin'ny pejy teo aloha (1:63). Olana mifandray amin'ny rojo azo atao.
Namboarina ny lesoka.
Msg 8928, haavo 16, fanjakana 1, andalana 8
Object ID 41, index ID 1, partition ID 281474979397632, fizarana ID 281474979397632 (karazana Data angona): Pejy (1:63) dia tsy azo namboarina. Jereo ny lesoka hafa raha mila fanazavana.
Hadisoana latabatra: ID ID 41, ID ID 1, ID fizarazarana 281474979397632, fizarana ID 281474979397632 (karazana angona In-row), pejy (1:63). Tsy nahomby ny fitsapana (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Ny sanda dia 2057 sy -4.
Msg 8976, haavo 16, fanjakana 1, andalana 8
Hadisoana latabatra: ID ID 41, ID ID 1, ID fizarazarana 281474979397632, fizarana ID 281474979397632 (karazana angona In-row). Pejy (1:63) dia tsy hita tao amin'ny scan na dia miresaka azy aza ny ray aman-dreniny (1: 111) sy ny teo aloha (1: 168). Zahao izay lesoka teo aloha.
Hadisoana eo amin'ny latabatra: haorina indray ny ID ID 41, ny mari-panondro 2.
Misy laharana 881 ao amin'ny pejy 15 ho an'ny object "sys.syscolpars".
Nahita lesoka fizarana 0 sy lesoka 4 tsy tapaka tamin'ny lisitra 'sys.syscolpars' (object ID 41) ny CHECKDB.
CHECKDB dia nametraka hadisoana 0 ary ny lesoka 4 tsy tapaka amin'ny latabatra 'sys.syscolpars' (object ID 41).
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysxlgns'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysxlgns”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysxsrvs'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysxsrvs”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysnsobjs'.
Misy laharana 1 ao amin'ny pejy 1 ho an'ny zavatra “sys.sysnsobjs”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysus germgs'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysus germgs”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.syscerts'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra "sys.syscerts".
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysrmtlgns'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysrmtlgns”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.syslnklgns'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.syslnklgns”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysxprops'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysxprops”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysscalartypes'.
Misy laharana 34 ao amin'ny pejy 1 ho an'ny "sys.sysscalartypes".
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.systypedsubobjs'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.systypedsubobjs”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysidxstats'.
Misy laharana 207 ao amin'ny pejy 5 ho an'ny zavatra “sys.sysidxstats”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysiscols'.
Misy laharana 399 ao anaty pejy 2 ho an'ny "sys.sysiscols".
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysendpts'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysendpts”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.syswebmethods'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.syswebmethods”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysbinobjs'.
Misy laharana 23 ao amin'ny pejy 1 ho an'ny zavatra “sys.sysbinobjs”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysaudact'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysaudact”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysobjvalues'.
Fanamboarana: Ny index Clustered dia nanorina tamim-pahombiazana ilay zavatra "sys.sysobjvalues" ao amin'ny tahiry "Error1".
Fanamboarana: Ny pejy (1:24) dia nifampiraharaha tamin'ny ID ID 60, ID ID 1, ID fizarazarana 281474980642816, fizarana ID 281474980642816 (karazana angona In-row).
Fanamboarana: Voafafa ny tsanganana data ivelan'ny laharana miaraka amin'ny ID 742981632, ho an'ny ID ID 60, ID ID 1, ID fisarahana 281474980642816, fizarana ID 71776119065149440 (karazana data LOB) eo amin'ny pejy (1: 369), slot 0.
Fanamboarana: Voafafa ny tsanganana data ivelan'ny laharana miaraka amin'ny ID 742981632, ho an'ny ID ID 60, ID ID 1, ID fisarahana 281474980642816, fizarana ID 71776119065149440 (karazana data LOB) eo amin'ny pejy (1: 370), slot 0.
Fanamboarana: Voafafa ny tsanganana data ivelan'ny laharana miaraka amin'ny ID 742981632, ho an'ny ID ID 60, ID ID 1, ID fisarahana 281474980642816, fizarana ID 71776119065149440 (karazana data LOB) eo amin'ny pejy (1: 371), slot 0.
Hadisoana eo amin'ny latabatra: haorina indray ny ID ID 60, ny mari-panondro 1.
Object ID 60, index ID 1, partition ID 281474980642816, fizarana ID 281474980642816 (karazana Data angona): Pejy (1:24) dia tsy azo namboarina. Jereo ny lesoka hafa raha mila fanazavana.
Hadisoana latabatra: ID ID 60, ID ID 1, ID fizarazarana 281474980642816, fizarana ID 281474980642816 (karazana angona In-row), pejy (1:24). Tsy nahomby ny fitsapana (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Ny sanda dia 2057 sy -4.
Hadisoana latabatra: ID ID 60, ID ID 1, ID fizarazarana 281474980642816, fizarana ID 281474980642816 (karazana angona In-row). Pejy (1:24) dia tsy hita tao amin'ny scan na dia miresaka azy aza ny ray aman-dreniny (1: 43) sy ny teo aloha (1: 213). Zahao izay lesoka teo aloha.
Hadisoana latabatra: ID ID 60, ID ID 1, ID fizarazarana 281474980642816, fizarana ID 281474980642816 (karazana angona In-row). Pejy (1:210) dia tsy ampy fanovozan-kevitra avy amin'ny pejy teo aloha (1:24). Olana mifandray amin'ny rojo azo atao.
Msg 8964, haavo 16, fanjakana 1, andalana 8
Hadisoana latabatra: ID ID 60, ID ID 1, ID fizarazarana 281474980642816, fizarana ID 71776119065149440 (karazana data LOB). Ny teboka angona ivelan'ny laharana ao amin'ny pejy (1: 369), slot 0, ID ID 742981632 dia tsy voatonona.
Hadisoana latabatra: ID ID 60, ID ID 1, ID fizarazarana 281474980642816, fizarana ID 71776119065149440 (karazana data LOB). Ny teboka angona ivelan'ny laharana ao amin'ny pejy (1: 370), slot 0, ID ID 742981632 dia tsy voatonona.
Hadisoana latabatra: ID ID 60, ID ID 1, ID fizarazarana 281474980642816, fizarana ID 71776119065149440 (karazana data LOB). Ny teboka angona ivelan'ny laharana ao amin'ny pejy (1: 371), slot 0, ID ID 742981632 dia tsy voatonona.
Misy laharana 203 ao amin'ny pejy 20 ho an'ny zavatra “sys.sysobjvalues”.
Hitan'ny CHECKDB ny lesoka 0 ary ny lesoka 8 tsy fitovizany eo amin'ny latabatra 'sys.sysobjvalues' (object ID 60).
CHECKDB dia nametraka hadisoana 0 ary ny lesoka 8 tsy tapaka amin'ny latabatra 'sys.sysobjvalues' (object ID 60).
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.syscscolsegments'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.syscscolsegments”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.syscsdictionaries'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.syscsdictionaries”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysclsobjs'.
Misy laharana 16 ao amin'ny pejy 1 ho an'ny zavatra “sys.sysclsobjs”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysrowsetrefs'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysrowsetrefs”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysremsvcbinds'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysremsvcbinds”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysxmitqueue'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysxmitqueue”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysrts'.
Misy laharana 1 ao amin'ny pejy 1 ho an'ny zavatra “sys.sysrts”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysconvgroup'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysconvgroup”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysdesend'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysdesend”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysdercv'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysdercv”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.syssingleobjrefs'.
Misy laharana 171 ao amin'ny pejy 1 ho an'ny zavatra “sys.syssingleobjrefs”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysmultiobjrefs'.
Misy laharana 107 ao anaty pejy 1 ho an'ny zavatra “sys.sysmultiobjrefs”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysguidrefs'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysguidrefs”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysfoqueues'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysfoqueues”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.syschildinsts'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.syschildinsts”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.syscompfragments'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.syscompfragments”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysftsemanticsdb'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysftsemanticsdb”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysftstops'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysftstops”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysftproperties'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysftproperties”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysxmitbody'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysxmitbody”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysfos'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysfos”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysqnames'.
Misy laharana 98 ao amin'ny pejy 1 ho an'ny zavatra “sys.sysqnames”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysxmlcomponent'.
Misy laharana 100 ao anaty pejy 1 ho an'ny zavatra “sys.sysxmlcomponent”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysxmlfacet'.
Misy laharana 112 ao amin'ny pejy 1 ho an'ny zavatra “sys.sysxmlfacet”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysxmlplacement'.
Misy laharana 19 ao amin'ny pejy 1 ho an'ny zavatra “sys.sysxmlplacement”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysobjkeycrypts'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysobjkeycrypts”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysasymkeys'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sysasymkeys”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.syssqlguides'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.syssqlguides”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sysbinsubobjs'.
Misy laharana 3 ao amin'ny pejy 1 ho an'ny zavatra “sys.sysbinsubobjs”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.syssoftobjrefs'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.syssoftobjrefs”.
Valin'ny DBCC momba ny 'sys.plan_persist_plan'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.plan_persist_plan”.
Valin'ny DBCC momba ny 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Misy laharana 0 ao anaty pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.plan_persist_runtime_stats”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.plan_persist_runtime_stats_interval”.
Valin'ny DBCC momba ny 'sys.plan_persist_context_settings'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.plan_persist_context_settings”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sqlagent_jobs'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sqlagent_jobs”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sqlagent_jobsteps”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.sqlagent_job_history'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.sqlagent_job_history”.
Valin'ny DBCC momba ny 'sys.queue_messages_2009058193'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.queue_messages_2009058193”.
Valin'ny DBCC momba ny 'sys.queue_messages_2041058307'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.queue_messages_2041058307”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.filestream_tombstone_2073058421”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.syscommittab'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.syscommittab”.
Valin'ny DBCC ho an'ny 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.filetable_updates_2105058535”.
Valin'ny DBCC momba ny 'sys.plan_persist_query_text'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.plan_persist_query_text”.
Valin'ny DBCC momba ny 'sys.plan_persist_query'.
Misy laharana 0 ao amin'ny pejy 0 ho an'ny zavatra “sys.plan_persist_query”.
Nahita lesoka fizarana 0 sy lesoka tsy fitoviana 12 tao amin'ny database 'Error1' i CHECKDB.
Ny CHECKDB dia nametraka lesoka 0 ary ny lesoka tsy miova 12 amin'ny database 'Error1'.
Msg 824, haavo 24, fanjakana 2, andalana 8
SQL Server nahatsikaritra lesoka I / O mifototra amin'ny lojika: tsy marina checkum (andrasana: 0xb7bd14b3; tena izy: 0xb7df14b2). Nitranga izany nandritra ny famakiana pejy (1:24) tao amin'ny tahiry ID 39 tamin'ny offset 0x00000000030000 ao amin'ny rakitra 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Hafatra fanampiny ao amin'ny SQL Server log error na lozisialy momba ny hetsika dia mety hanome antsipiriany bebe kokoa. Ity dia fepetra goavambe diso izay mandrahona ny tsy fivadihan'ny tahiry ary tsy maintsy ahitsy eo noho eo. Fenoy ny fanaraha-maso tsy fitoviana tahiry (DBCC CHECKDB). Ity lesoka ity dia mety miteraka antony maro; raha mila fanazavana fanampiny, jereo SQL Server Boky an-tserasera.
SQL Server nahatsikaritra lesoka I / O mifototra amin'ny lojika: tsy marina checkum (andrasana: 0xc8e2ed96; tena: 0xb8a2f3df). Nitranga izany nandritra ny famakiana pejy (1:63) tao amin'ny kaonty ID 39 ao amin'ny offset 0x0000000007e000 ao amin'ny rakitra 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Hafatra fanampiny ao amin'ny SQL Server log error na lozisialy momba ny hetsika dia mety hanome antsipiriany bebe kokoa. Ity dia fepetra goavambe diso izay mandrahona ny tsy fivadihan'ny tahiry ary tsy maintsy ahitsy eo noho eo. Fenoy ny fanaraha-maso tsy fitoviana tahiry (DBCC CHECKDB). Ity lesoka ity dia mety miteraka antony maro; raha mila fanazavana fanampiny, jereo SQL Server Boky an-tserasera.
izay 'Error1' no anaran'ny tahiry MDF maloto manamboatra.
Msg 8945 manondro ny lesoka latabatra izay lesoka tsy miovaova.
Ao anatin'ny SQL Server MDF database, misy maro latabatra rafitra ampiasaina hitahiry ny firafitra sy ny angon-drakitra momba ny data.
Rehefa hitan'ny CHECKDB fa misy tsy fitoviana amin'ny iray amin'ireo latabatra ao amin'ny rafitra dia hitatitra ny hafatra diso izany Msg 8945, 8978, 8928, 8939, sns. ary manandrama manamboatra ny lesoka. Raha tsy afaka manamboatra ny lesoka izy dia tsy mahomby ny fanarenana ary hitarika fahadisoana bebe kokoa, toy ny Msg 824.
Ohatra ny rakitra MDF simba izay hiteraka ny Msg 8945 fahadisoana:
SQL Server 2014 Hadisoana5.mdf Error5_fixed.mdf